ज्ञानेन्द्र शाही समर्थकले जड्याहा पि*टेपछी पर्यो लफ*डा, घुसपैट भो भन्दै सर्वसाधारण पि*ट्न पाइन्छ ? (हेर्नुस् भिडियो) - Nepal Insider
ज्ञानेन्द्र शाही समर्थकले जड्याहा पि*टेपछी पर्यो लफ*डा, घुसपैट भो भन्दै सर्वसाधारण पि*ट्न पाइन्छ ? (हेर्नुस् भिडियो)
January 18, 2020 238
एमसीसी ठीक कि गलत ? राजनीतिक तहमा केही सेलाएको बहस अहिले सामाजिक सञ्जालमा भने निकै तातेको छ । रोचक कुरा, यो बहसले युवा पुस्ता पनि तानिएका छन्। राष्ट्रिय एजेन्डामाथि युवाहरुले चासो राखेर बहसमा उत्रिनु राम्रो हो । तर, सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण प्रचारवाजी पनि उत्तिकै भइरहेका छन् । ‘सम्झौताका आपत्तिजनक बुँदा’ भन्दै भए–नभएका कुराहरु लेखेर भाइरल बनाइएको छ । यसले धेरैलाई अन्योलमा पारेको छ ।
केही राष्ट्रवादी धारका नेता र अभियन्ताले विषयलाई अतिरञ्जित ढंगले व्याख्या गरेका छन् । एमसीसीको बारेमा अन्योल सिर्जना भइरहेको बेला एमसीसीको बिरोधमा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही र उनका समर्थकले माइतीघर मण्डलामा व्यापक सडक आन्दोलन गरेका छन् । विभिन्न नारा सहित माइतीघरमा जम्मा भइ गरिएको दबाब कार्यक्रम चल्दै गर्दा ज्ञानेन्द्र शाहीका समर्थकले एक जड्याहा पि*टेपछी लफ*डा परेको छ ।
ल*फडा परेपछि ति व्यक्तिलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ । देशको स्वाधीनता, अश्मिता र स्वाभिमानका निम्ति एक पटक फेरी लड्न तयार रहेको भन्दै चर्को नारा बाजी गरेका छन् । एमसीसीको बिरुद्ध सारा नेपाली एकजुट हुनुपर्ने नारासहित उत्रिएका ज्ञानेन्द्र शाही र उनका समर्थकले ‘हिमालहरु बेच्न पाइदैन’, ‘सूचना तथा प्रबिधि बिधेयक खारेज गर’, जस्ता प्लेकार्ड सहित माइतीघरमा चर्को बिरोध गरेका छन् । बिस्तृतमा तलको भिडियोमा हेर्नुहोला :
Prevएकै पटक चार बच्चालाइ जन्म दिएपछि बाबुले भने, ‘हुर्काउनै मुस्किल चार अमूल्य उपहार’
Nextप्रहरीसँग लिएको पंङ्गा गायिका आस्था राउतलाई महंगो पर्यो, अनुसन्धान सुरु
रन्जनाले गरिन देउरानी अस्मितालाई प्रश्नै प्रश्न,समयले तिमीलाई असल मलाई ख,राब बनायो(भिडियो हेर्नुहोस)